Ished Nesidlo Sakusasa - I-Airbnb
Ished Nesidlo Sakusasa
Isidlo sakusasa sokuqala saseNew Zealand yeyona fama isemagqabini. Indawo etshintshiweyo yindawo yokuhlala engaqhelekanga, nenomoya opholileyo. Iigusha eziyi-210 eziphilayo, inyama yenkomo kunye nefama encinci. Yonwabela ukutya okuphekiweyo kwasekhaya! Yonwabele.
Ifama yam iseHunter, ngaphandle nje kwe-Highway One
Ihektare eziyi-210 zomhlaba, ngumoya, imvula nelanga
Iigusha ezingaphezu kwe-500 kunye neenkomo eziyi-90
Makubekho ezinye izinto zomsebenzi kangangeeyure ezimbalwa
Kwaye ukuqhuba ibhayisekile akuyi kuqukwa
Amaqanda amatsha, ubisi nesonka zisoloko zinikezelwa
Imifuno nayo iyadingeka
Indawo yasemaphandleni, ekhusela indalo nobubele kukuhlala kwakho kwindawo ebalaseleyo
Imifanekiso engezantsi yekhitshi, igumbi lokuhlala kunye nebhedi
Ngoko yongeza kwezi foto ubuntu bakho nexesha lakho
Hlamba ngomculo, incoko kunye newayini
Ndifowunele nje uze utyelele, ndiyakuqinisekisa ngobumnandi
Ikhaya lam liseHunter, ngaphandle nje kwe-Highway One
Malunga Nesidlo Sakusasa:
Ukusuka ngaphandle, le yunithi ibonakala injalo. Into ephawuliweyo. Kodwa ungaze uyifake incwadi ngekhava yayo...Ngaphakathi, le ndawo itshintshwe yayindawo enegumbi elahlukileyo nenqanaba elahlukileyo, evulekileyo. Indawo yabucala iquka igumbi lokulala, indawo yokuphumla, indawo yokufunda, ibhari yesidlo sakusasa nekhitshi. Igumbi lokulala linebhedi enkulu elala abantu ababini, kwaye indawo yokuphumla inokulala abantu abathathu (indawo yokufunda itshintsha ibe yibhedi elala abantu ababini ibe kukho nefuton enye).
Ilanga liphuma ngaphandle nje kweefestile ezinkulu kwigumbi lokulala, ligcwala ngamalanga okufika kwangoko. Ekuseni, ngokukodwa entwasahlobo kunokuba mnandi. Iintaka zivuka ngokutshona kwelanga zize ziqale ukuzonwabisa ngokwenza induli zize zizityise phandle. Kwakhona, izinto zokulima ziqala kwangethuba ngoko ungothuki xa uva ibhayisekile engaqhelekanga ihamba endlini kwiiyure zakuqala! Nangona kunjalo, iindwendwe zivumelekile ukuba zilale emva kwexesha kangangoko zifuna.
4.97 out of 5 stars from 380 reviews
4.97 · Izimvo eziyi-380
I-Hunter Hills Imperics yifama eyi-210 yehektare, ifama yimizuzu eyi-30 kuphela xa uqhuba umzantsi weTimaru. Abamelwane abakufutshane bakumgama weekhilomitha eziliqela.
I-Hunter Hills ziigusha eziqinisekisiweyo, inyama yenkomo kunye nefama eyojiweyo. Iindwendwe zivumelekile ukuba zithathe inxaxheba kwimisebenzi yokulima ngexesha lokuhlala kwazo.
Izinto ezenziwa efama zingaquka:
- Ukunceda ubisi uTulu inkomo
- Ukufunda indlela yokwenza ubisi olukrwada, itshizi ephilayo
- Ukuvuna ii-veggies ezisandul 'ukuvunwa kwigadi yemifuno
- Iigusha ezihamba ngebhayisekile
- Ukuqokelela amaqanda kunye nezinja ezisebenzayo, iPup kunye neBarley
- Ukuthiya iitakane neethole entwasahlobo
- Ukubukela uDavid egalela iigusha kwimizuzu emihlanu, kwaye nawe uhambe
- Ukubalisa amabali, iindlela zokupheka nomculo
I-Hunter Hills ziigusha eziqinisekisiweyo, inyama yenkomo kunye nefama eyojiweyo. Iindwendwe zivumelekile ukuba zithathe inxaxheba kwimisebenzi yokulima ngexesha lokuhlala kwazo…